Saamaynta Khadku ku leeyahay Daabacaadda dhalaalaya
Horudhac: dhalaalka walaxda daabacan waxa loola jeedaa heerka ay awoodda milicsiga ee dusha walaxda daabacan ee iftiinka dhacdada ay ugu dhowdahay awoodda milicsiga ee buuxda. Dhallaanka walxaha daabacan waxaa inta badan lagu go'aamiyaa arrimo ay ka mid yihiin warqad, khad, cadaadiska daabacaadda iyo ...
Lix talo oo loogu talagalay Nakhshad Baakadaha
Tayada naqshadaynta baakadku maaha mid la mid ah tayada ganacsiga, laakiin macaamiishu waxay yeelan doonaan fikrado horay loo soo qaatay, haddii shirkadu aysan xitaa fiiro gaar ah u siin naqshadeynta baakadaha, taas oo bixin doonta tayada alaabta? Ma jirto wax dafiri kara in tayada ay tahay waxa ugu horreeya ee t...
Marka la eego tayada Walaxda Daabacan, Arrimahan waa in la xuso
Hordhac: Walaxda daabacan waa in ay muujiso qiimaheeda iyada oo loo marayo dusha sare ee qoraalka iyo daabacaadda qoraalka, iftiinka dusha sare ee walaxda daabacan oo lagu dahaadhay lakab aan midab lahayn, ka dib marka la simo, oo lagu qalajiyo dusha sare ee walxaha daabacan si ay u sameeyaan khafiif ah iyo direys hufan br...
Ma Taqaanaa Sida Loo Horumariyo Tayada Sanduuqa Midabka Daabacaadda?
Hordhac: Sawirka dibadda ee alaabta tartanka suuqa ba'an ayaa noqonaya mid aad iyo aad u muhiim ah, sanduuqa midabka sababtoo ah heerkiisa sare, jilicsan, quruxda ayaa noqda doorashada ugu fiican ee sawirka dibadda ee baakadaha alaabta, sanduuqa midabku maaha kaliya miisaanka khafiifka ah. , fududahay in la qaado, garaac ballaadhan...
Maxaa habboon in lagu tixgeliyo Fikirka Quruxda leh ee Nakhshadeynta Baakadaha?
Soo koobid: Naqshadeynta baakadaha calaamadda, quruxda farshaxanka iyo quruxda shaqeynta ee naqshadeynta baakadaha waa inay noqotaa xiriir midaysan oo dabiici ah, quruxda shaqeyntu waa aasaaska iyo aasaaska quruxda farshaxanka, quruxda farshaxanku waxay u jeeddaa quruxda shaqeynta. Warqadani waxay sharraxaysaa xiriirka ...
Laga soo bilaabo xulashada walxaha ilaa daabacaadda ilaa badeecada dhammaatay, tani waa sida calaamadaha filimada loo soo saaro
Horudhac: La qabsiga summada filimku waa mid aad u xoog badan. Waxaa lagu qurxin karaa caag, bir, dhalooyin iyo weelal kale oo baakadaha ah. Calaamadda gacmaha filimada ee la jeexjeexo ayaa caan ku ah suuqa sababtoo ah waxay isku dari kartaa qaabab tayo sare leh iyo qaabab gaar ah. Maqaalkan la wadaag...
Intee in le'eg ayaad ka taqaanaa khad lagu daro?
Sababo la xiriira kala duwanaansho weyn ee heerkulka deegaanka daabacaadda iyo huurka, shuruudaha habka guryaha kala duwan iyo printability, nooc kasta oo midabka khad, link loo isticmaalo by saamiga wax iyo wax buuxinta waa ku dhawaad ​​joogto ah, haddii weli ma buuxin karo shuruudaha t...
Saddex - Qodobbada Xakamaynta Tayada Shaabada Kulul ee cabbirka iyo Daawaynta cilladaha
Shaabada kulul ee saddex-geesoodka ah waa isku-darka saameynta cadaadiska cadaadiska iyo dhejinta kulul, taas oo leh saameyn wanaagsan oo liddi ku ah been-abuurka iyo farshaxanka, sidaas darteed si ballaaran ayaa loo isticmaalay. Laakiin xakamaynta tayada shaabada kulul ee saddex-geesoodka ah waa dhibaato aad u adag. Warqadan ayaa si kooban u sharraxaysa...
Maxaad ka taqaanaa sanduuqa hadyada ee dhamaadka-sare?
Ku saabsan qeexitaanka sanduuqa hadiyadeed ee dhamaadka-sare, xitaa haddii raadinta Google, sidoo kale ma laha qeexitaanno sax ah, iyo qeexida qof kastaa waa ka duwan yahay, maqaalkani wuxuu ka hadlay sanduuqa hadiyadda ee kor u kaca, inta badan ee sanduuqa dhejiska, kaas oo u baahan hab badan. , oo u baahan sanduuqa dhejiska oo faahfaahsan, nuxur f...
Aqoonta Agabka Baakadaha: Faham Sifada Warqada, Hagaaji tayada Baakadaha iyo Daabacaada
Abstract: Warqaddu waa shayga ugu badan ee loo isticmaalo daabacaadda baakadaha. Hantideeda jireed waxay saameyn toos ah ama mid aan toos ahayn ku leeyihiin tayada daabacaadda. Fahamka saxda ah iyo haynta dabeecadda warqadda, iyadoo loo eegayo sifooyinka alaabta, isticmaalka macquulka ah ee warqadda si loo hagaajiyo
Ma Fahantay Farsamada Daabacaadda Ka-hortagga Been-abuurka ee Calaamadaha Istiikarada?
Hordhac: Calaamadaha is-ku dhejinta ee ka hortagga been-abuurka ganacsiga ayaa aad ugu badan nolosha, noocyada kala duwan ee adeegsiga tignoolajiyada ka hortagga been-abuurka ayaa aad u kala duwan, qaybta soo socota ee tignoolajiyada daabacaadda been-abuurka ah ee calaamadda is-ku dhejinta, nuxurka asxaabta ...
Habka Daabacaadda UV Frosted Sifooyin iyo Cilad-raadinta
Hagaha: kuwa wax soo saara iyo isticmaalayaashuba waxay si aad ah iyo aad u badan u fiirsadaan baakadaha dibadda ee alaabta, iyo baahida suuqa ee baakadaha kala duwan ee dhamaadka-sare iyo baakadaha shakhsi ahaaneed ayaa sii kordhaya. Ka-hortagga saxaafadeed ee badeecadaha, daabacaadda barafaysan ee UV ayaa soo jiidatay dareen weyn…
wada tashi xor ah 0086-18850140115
CINWAANKA Dhismaha 4, No. 20, Zhaoyu Road, Gaishan Town, Fuzhou, Fujian, Shiinaha
Kafeega daabacaadda astaanta astaanta gaarka ah 350g sanduuqa warqadda cad cad
Sanduuqa xaashida daryeelka maqaarka waxaa la geliyaa sanduuqa nooca buug ee PVC
© Xuquuqda daabacaadda - 2020-2023: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.